Found 82 ~ Mateu, Mark, Ruka, John, Mabasa, VaRoma, 1 VaKorinte, 2 VaKorinte, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 VaTesaronika, 2 VaTesaronika, 1 Timoti, 2 Timoti, Tito, Firimoni, VaHebheru, James, 1 Petro, 2 Petro, 1 Johani, 2 Johani, 3 Johani, Judha, Zvakazarurwa
Pamunopinda imomo kwazisai vomumbamo. Kana imba iyoyo ichikodzera, rugare rwenyu ngaruende pairi.
Asi kana isingakodzeri, rugare rwenyu ngarudzokere kwamuri.
“Regai kufunga kuti ndakauya kuzounza rugare panyika. Handina kuuya kuzounza rugare asi hondo yebakatwa
kuzovhenekera vagere murima nomumumvuri worufu, nokutungamirira tsoka dzedu munzira yorugare.”
“Mbiri kuna Mwari kumusorosoro, pasi pano rugare ruve kuvanhu vaanofarira.”
“Tenzi mungachirega muranda wenyu zvino achienda norugare, sokureva kwenyu,
Iye ndokuti kumukadzi, “Chitendero chako chakuponesa, chienda zvako murugare.”
Jesu akati kwaari, “Mukunda, kutenda kwako kwakuponesa chienda zvako norugare.”
Imba yose yamanopinda tangai mati, “Rugare ngaruve muimba ino.”
Kana munhu wepo ari worugare, rugare rwenyu ruchava paari. Kana asiri worugare, rugare rwenyu ruchadzokera kwamuri.
Regai kufunga kutoti ndakauya kuzounza rugare panyika. Ndinokutaurirai kuti kwete asi kuti ndakaunza kuparadzanisa.
vachiti, “Ngaarumbidzwe Mambo anouya muzita raTenzi. Rugare ngaruve kudenga nembiri ive kumusorosoro.”
achiti, “Dai wanga uchiziva nhai zvinhu zvinounza rugare asi zvino zvakavanzwa kwauri.
Pavakanga vachiri kutaura izvi. Iye Jesu pachake akamira pakati pavo (akati kwavari, “Rugare ngaruve nemi”).
Ndakutaurirai izvi kuti muwane rugare mandiri. Pasi pano muchava namatambudziko asi tsungai mwoyo ndakakunda pasi.”
Manheru ezuva rakarero, zuva rokutanga revhiki Jesu akauya mumba maiva navadzidzi; izvozvo makonhi amavakanga vari akanga akaiswa zvihuri pamusana pokutya vaJudha. Akasvikomira pakati pavo akati kwavari, “Rugare ngaruve nemi.”
Jesu akavatizve, “Rugare ngaruve nemi! Sokundituma kwakaita Baba neni ndinokutumaiwo saizvozvo.”
Mushure memazuva masere vadzidzi vake vakanga vari mumba muyazve uye Tomasi akanga ainavo. Makonhi akanga akapfigwa, Jesu akauya akamira pakati pavo akati kwavari, “Rugare ngaruve nemi.”
Imi munoziva izwi raakatuma kuIsiraeri raiparidza Shoko Rakanaka rorugare zvichiitwa nokuna Jesu Kristu Tenzi wavose.
Herodhi akashatirirwa vanhu veTire neSidhoni zvikuru. Nezvo vakaenda kwaari vari chikwata. Ipapo vakanga vashamwaridzana naBhurasitosi mukuru mukuru wapamba pamambo. Saizvozvo vakakumbira kuti pave norugare nokuti nyika yavo yaitoraramiswa nezvokudya chinobva kunyika yamambo.
Pavakaona vapedza nguva yakati kuti vakavaperekedza kuti vaende norugare kune vakanga vavatuma. Kune vakanga vavatuma.
Muchengeti wapajeri akasvitsa shoko kuna Pauro achiti, “Vatongi vatuma shoko rokuti muende zvenyu.” Saizvozvo chibudai muende zvenyu norugare.
Paakadaidzwa, Teturosi akatangisa kumupa mhosva akati, “Changamire, vaFerekisi nenzira yokuti nokuda kwenyu tine rugare rukuru uye nokutichengeta kwenyu zvinhu zvizhinji zviri kunatsiridzwa kurudzi rwedu urwu.
Asi munhu wose anoita zvakanaka achawana mbiri norukudzo norugare zvichitangirawo kumuJudha tevere muGiriki,
Mugariro worugare havauzivi.
Naizvozvo zvatakaruramiswa nechitendero tine rugare naMwari nokuna Tenzi wedu Jesu Kristu akaita kuti
Naizvozvo ngativavarirei kuita zvinounza rugare nezvinoita kuti tivakane.
Mwari worugare ngaave nemi mose. Ameni.
1 VaKorinte 7:15
Asi kana uyo asingatendi achida kuti vasiyane, ngavasiyane. Pakadaro hama munamati yakasununguka nokuti Mwari akatidanira rugare.
1 VaKorinte 14:33
nokuti Mwari haasi Mwari wenyonganyonga asi worugare somumasangano ose avatsvene.
1 VaKorinte 16:11
Ngaparege kuva nomunhu anomushora. Muperekedzei aite rwendo rwake norugare kuti adzokere kwandiri nokuti ndinomutarisira kuno pamwe nevehama.
2 VaKorinte 13:11
Pokupedzisira, hama dzangu, ndinoti chisarai. Gadziridzai nzira dzenyu. Teererai zvandinotaura, wiriranai, garisanai zvakanaka. Mwari werudo norugare achava nemi.
Rugare nengoni ngazvive kune vose vanofamba nenzira iyi nekune vaIsiraeri vaMwari.
Nokuti Kristu ndiye rugare rwedu akaita kuti tive vamwe akaputsa munyama yake chidziro chaiparadzanisa vanhu choruvengo
nokudzima mutemo wemirao nezvirevo kuti aumbe maari iye munhu mumwechete mutsva panzvimbo yavaviri. Nokudaro akaunza rugare.
Akauya akaparidza rugare kwamuri imi maiva kure kure. Akaparidzawo rugare kune vakanga vari padyo
Mutsoka dzenyu pfekai shangu dzokuda kuparidza Shoko Rakanaka rorugare
Hama Mwari Baba naTenzi Jesu Kristu ngaakuwanisei rugare norudo nechitendero.
Rugare rwaMwari runopfuura kunzwisia kose ruchachengeta mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna Kristu Jesu.
Itai zvamakadzidza mukagamuchira nokunzwa nokuona mandiri. Mwari worugare achava nemi.
Rugare rwaKristu ngarwutonge mumwoyo menyu. Ndizvo chaizvo zvamakadaidzirwa kuti muve mumuviri mumwechete muchitenda.
Vanhu pavanenge voti kune rugare uye hakuna chinotiwana, pakare pakarepo ndipo pavanobva vavingwa nokuparadzwa sokuuya kunoita kurwadziwa pamukadzi ana pamuviri. Hapana zvokupukunyuka.
2 VaTesaronika 3:16
Zvino Tenzi worugare pachake ngaakupei rugare nguva dzose nenzira dzakasiyana — siyana. Tenzi ngaave nemi mose.
madzimambo navose vari pazvinzvimbo zvapamusoro kuti tigare upenyu hune runyararo norugare, upenyu huna Mwari mukati uye hunoremekedzwa mativi ose.
Naizvozvo siyana nehavi dzevechiduku unangane noururami nechitendero norudo norugare pamwechete navanodaidza kuna Tenzi nemwoyo wakanaka.
Abhurahamu akamupa chegumi chezvinhu zvake zvose. Kana zita rake rotsanangurwa, pokutanga rinoreva kuti ndiMambo woururami, rinorevawo kuti ndiMambo weSaremu, zvichireva kuti Mambo worugare.
Panguva iyoyo kurangwa kwose kunorwadza panze pokufadza asi pashure kunoberekera vadzidziswa nako muchero worugare wokururama.
Vavarirai kuva norugare navanhu vose uye kuva noutsvene hwokuti kana munhu asinahwo haakwanisi kuona Tenzi.
Iye Mwari worugare akamutsa Tenzi wedu Jesu kuvakafa akava mufudzi mukuru wehwai pamusana peropa rechitenderano chinogara nokusingaperi.
mumwe wenyu oti kwavari, “Endai zvenyu norugare mudziirirwe uye mugute” asingavape zvinodikanwa nomuviri zvinobatsirei.
Asi ungwaru hunobva kudenga, pokutanga hutsvene kwouya kuti ndehwerugare nemwoyo murefu, hunonzwisisa, uye huzere tsitsi, hune michero yakanaka husina chinokahadzisa kana chinonyengedza.
Muchero woururami unodyarwa murugare navawadzanisi.
Ngaasiane nouipi aite zvakanaka ngaatsvake rugare arutevere,
Kwazisanai nokutsvodana kworudo rwechikristu. Rugare ngaruve nemi mose muna Kristu.
Naizvozvo vadikanwi, sezvamuri kumirira izvi, vavarirai kwazvo kuti akuwanei musina kana kavara kana chinoshoreka uye mune rugare.
3 Johani 1:15
Rugare ngaruve newe. Muri kukwaziswa neshamwari. Undikwazisirewo shamwari dzose uchidzidoma namazita.
Pakabva pabuda rimwe bhiza rakati piriviri kutsvuka. Mutasvi waro akabvumirwa kubvisa rugare panyika. Akapiwa bakatwa guru kuti vanhu vaurayane.